[ Sep 24, 2017 ] अब अन्तरीक्षमै अन्तिम संस्कार, ५४ जना मान्छेको शव पठाइँदै
रुसको एक कम्पनी KiroRus ले मृतक मानिस तथा जनावरको शवलाई अन्तरीक्षमा पठाउने तयारी गरिरहेको छ । कम्पनीका अनुसार २ सयभन्दा बढि मानिसहरुले यो अनौठो अन्तिम संस्कार सेवाका लागि बुकिंग गराइसकेका छन् । सन् २००५ देखि अहिलेसम्म…
[ Sep 17, 2017 ] जनता भोकमरीमाः सरकार भन्छ, खरायो खाउ
दुनियामा केही यस्ता देश छन् जहाँ भोकमरी फैलिरहन्छ । सरकारहरुले जनताकेा भोकमरी हटाउनका लागि विभिन्न खाले योजना तयार गर्दछन् । भोकमरीबाट ग्रस्त एउटा देश हो भेनेजुयला । भेनेजुयला सरकारले पनि हालै भोकमरी हटाउनका लागि एउटा विशेष…
[ Sep 12, 2017 ] टिकटविना परेवाले यात्रा गरेपछि बस कन्डक्टरलाई चेतावनी
भारतको तमिलनाडुमा भएको एउटा घटना अहिले चर्चामा रहेछ । सोसल मिडियामा पनि यसको चर्चा भैरहेको छ भारतमा । हालै तमिलनाडु परिवहन निगमको एउटा बसहरुरबाट एलावडीतर्फ जाँदै थियो । सोही क्रममा बीच बाटोमा टिकट जाँच गर्ने जाँचकर्ता…
[ Sep 11, 2017 ] यहाँ सडक बालबालिकाले निकाल्छन् पत्रिका, सम्पादक र रिपोर्टर पनि आफैं
कहिलेकाहिँ बच्चाहरुले यस्तो काम गर्दछन् कि त्यो कल्पना पनि गरिएको हुँदैन । जहाँ इच्छा, त्यहाँ उपाय भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्छन् कहिलेकाहिँ कलिला उमेरका बालबालिकाहरुले । भारतको दिल्लीस्थित गौतमनगरका केही बालबालिकाहरुले यस्तै जब्बर काम गरेका छन् । …
[ Sep 09, 2017 ] पत्ता लाग्यो मान्छेको अधिकतम आयु
तपाइँ चाहे जति नै धेरै स्वस्थ किन नहुनुस् वा बाँच्नका लागि अनेकन जुक्ति किन नगर्नुस्, एकदिन मर्नैपर्दछ । कोही धेरै बाँच्ला, कोही छिटै मर्ला कुरा यत्तिमात्र हो । आखिर मान्छे सबैभन्दा धेरै कति उमेरसम्म बाँच्नसक्ला ?…
[ Aug 28, 2017 ] हाम्रै सौर्यमण्डलका यी ग्रहमा हुन्छ हिराको वर्षा
सौर्य परिवारको एक ग्रह पृथ्वीमा पानीको वर्षातले कहिलेकाहिँ बबण्डर मच्चाउँछ । तर यही मण्डलका दुई ग्रहहरु, अरुण र बरुणमा चाहिँ हिराको वर्षा हुन्छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार, पछिल्ला केही दिनयता अरुण र बरुण ग्रहमा हिराको अविरल वर्षा भैरहेको छ ।
[ Aug 27, 2017 ] यो जेललाई देख्दा तपाईंलाई पनि कैदी बन्ने इच्छा जाग्ला, यस्ता छन् सुविधा
फाइभ स्टार होटल हुनु त सामान्य कुरा भयो । तर के फाइभ स्टार जेल हुनुपनि सामान्य हो त ? निश्चित रुपमा होइन । तर अष्ट्रियामा चाहीँ एउटा फाइभ स्टार जेल छ । अष्ट्रियाको जस्टिस सेन्टर लियोबेन…
[ Aug 26, 2017 ] यो हो विश्वके ठूलो किर्तिमानी समोसा
पूरै १५ घण्टाको समय लगाएर तयार पारिएको छ विश्वको सबैभन्दा ठूलो समोसा । यो समोसा डेढ क्विन्टल अर्थात् १५० किलो वजनको छ । बेलायतको राजधानी लण्डनमा बनाइएको उक्त समोसाले चर्चा बटुलिरहेको छ । नबटुलोस् पनि किन ? यो विश्वको सबैभन्दा…
[ Aug 24, 2017 ] यस्तो चिडियाखाना, जहाँ हाँसको बचेराले जुत्ता लगाउँछ
कपडा तथा जुत्तामोजा केवल मानिसका लागि मात्र त बनेको हो । जनावर र पशुपंक्षीले त भुत्ला र प्व्ााँखले नै जिउको सुरक्षा गरेका हुन्छन् ।खुट्टामा पनि प्रकृतिले त्यस्तै सुरक्षा कवच बनाइदिएको हुन्छ । जसका कारण उनीहरुलाई हामीले जस्तो जुत्ता लगाउनु…
[ Aug 11, 2017 ] प्रतिघन्टा एक हजार शुल्क लिन्छन् यी पुरुष, महिलाहरुले घरमै बोलाउँछन् के का लागि ?
उनी न त कुनै डाक्टर हुन्, न त कुनै परामर्शदाता । तर उनले प्रति घण्टाको करीब एक हजार रुपैयाँ बराबरको शुल्क लिन्छन् । अनि महिलाहरु उनलाई घरमै बोलाएर उक्त शुल्क तिरेर भरपूर प्राप्त गर्दछन् । आखिर जापानका टाकानोबू निसिमोटोले…
[ Aug 10, 2017 ] यो हो कहिल्यै पनि नमर्ने जीव, यस्तो छ रहस्य
आठवटा खुट्टा भएको सुक्ष्म जीव टार्डिग्रेड्सको वंशाणु (जिन) को अध्ययनपश्चात उसको असाधारण क्षमताको पहिचान भएको छ ।एक मिलिमिटर वा त्योभन्दा पनि सानो आकारको यो जीव विकिरणयुक्त क्षेत्र, अत्यधिक चिसो ठाउँ, खतरनाक सुख्खा ठाउँमा मात्र होइन, अन्तरीक्षणमा समेत बाँच्न सक्दछ…
[ Aug 09, 2017 ] फेला पर्‍यो ८ किलोको च्याउ !
एउटा नाथे च्याउको तौल कति होला र ? तर चीनमा भने पूरै ८ किलो तौलको च्याउ फेला परेको छ । चीनको युनान प्रान्तमा उक्त भिमकाय च्याउ भेटिएको हो । यो च्याउको वजन ८ किलो छ भने यसको छाताको परिधि…
[ Aug 07, 2017 ] हाँसको एउटै अण्डाबाट जन्मिए जुम्ल्याहा चल्ला
चराको एउटा अण्डा भित्रबाट जुम्ल्याहा चल्ला कोरलिएको कहिल्यै सुन्नुभएको छ ? अहिलेसम्म सुनिएको थिएन । तर क्यानडामा यो घटना भएको छ । क्यानडामा एउटा हाँसको अण्डाबाट जुम्ल्याहा चल्ला निस्केका छन् । दुःखद कुरा के भने यी जुम्ल्याहा चल्लाको जिउ…